Sawir gacmeedyada xayawaanka khiyaaliga ah ee farshaxanyahankan u dhashay Ruushka ee lagu magacaabo Hontor | Abuurista khadka tooska ah
Dhawr bilood ka hor ayaa farshaxan qoryo ka gooyay xariiqyadan, gacmo karti leh wuxuu awoodaa inuu abuuro farshaxanno xayawaanno ah oo u muuqda inay socdaan. Waa in la tuuro mala-awaal yar marka loo eego qaab-dhismeedkiisa qaybo ka mid ah waxaan qiyaas ahaan u qiyaasi karnaa boodka la bixinayo ama tartanka orodka leh ee ay xambaarsan tahay. Guiseppe Rumerio waa farshaxankii naga tagay isagoo aad u wareersan ka hor tayadiisa weyn.
Hadda waxaan aadeynaa dhulalka qabow ee Ruushka si aan u helno mid kale oo adeegsada nooc kale oo maaddad ah, laakiin leh tayo sare: Evgeny hontor. Istuudiyahiisa, Demiurgus Dreams, waxaa loo aasaasay abuurista farshaxanno xayawaan aad u qurux badan oo aad u badan sidaa darteedna wuxuu ku leeyahay buugaggiisa waxoogaa sharaf leh sumcaddiisa. Dhoobada jilicsan ayaa ah walxaha loo adeegsado abuuritaanadan si aad ah ugu dhufanaya isha qaawan ee daawadayaasha.
Evgeny Hontor wuxuu bilaabay farshaxanimada 2006 wuxuuna aasaasay dukaankiisa Etsy sanadkii 2012. Hada Demiurgus Riyooyinku waxay leeyihiin tiro aad u tiro badan oo raacsan taasi waxay gaareysaa 34.000 oo markaad aragto shaqadooda waad fahmi kartaa sababta.
Istuudiyaha wuxuu abuuraa farshaxanno leh a hodan weyn faahfaahinta leh dhoobo jilicsan Qeybaha uu curiyay waxay u muuqdaan kuwo gaar ah qaabkaas oo ah faahfaahinta waa weyn waxaa iska leh milkiilaha istuudiyaha laftiisa muddadaa 6-da sano ah. Sawir gacmeedyadan firfircoon waxay naftooda ku leeyihiin hibo aad u wanaagsan sida aad ku arki karto qayb ka mid ah oo aan halkan ku wadaagi doonno sawirro.
Waa Hontor laftiisa oo sharxaya sababta aad u jeceshahay farshaxanka noocaas ah khiyaali ah, maadaama sida ay tiraahdo, ay qurux badan tahay oo la sahamin karo fursado cusub. Waxay la mid tahay falsafadda nolosha. Waxaad haysaa dukaankooda Etsy isla xiriirkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Farshaxanyahankan Ruushka ah wuxuu abuuraa farshaxanno xayawaanno cajiib ah leh dhoobo jilicsan
Buugaagta xusuus qorka ee Harry Potter Moleskine waxay kuu daayaan inaad hadasho